तुलसीको बिरुवा रोपेर हरिशयनी एकादशी मनाईँदै – Radio Bageshwori FM 94.6 MHz
तुलसीको बिरुवा रोपेर हरिशयनी एकादशी मनाईँदै
हरेक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारी चार महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ ।
एक महिनाअघि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घरघरको तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा मोठमा सारिन्छ ।
सनातन वैदिक परम्पराअनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रुपमा मानिन्छ । बुधबारदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ ।
आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म चार महिना भगवान् विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्ने भएकाले आजको दिनलाई हरिशयनी एकादशी भनिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । भगवान विष्णुले शयन गर्ने चार महिनालाई चतुर्मासा पनि भनिन्छ ।
एक वर्षमा २४ एकादशी पर्छन् । सक्नेले सबै एकादशीमा फलाहार मात्र गरेर व्रत बस्छन् । नसक्नेले चतुर्मासाका चार महिनामा पर्ने आठ एकादशीमा व्रत गर्छन् । यस वर्ष असोज महिनामा अधिकमास पर्ने भएकाले चतुर्मासा भनिए पनि पाँच महिना हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । यस वर्ष चतुर्मासाको अवधिमा १० एकादशी पर्छन् । अधिकमासका कारण पद्मनी र परमा नामका दुई एकादशी बढी भएका हुन् ।
कामकाजमा सक्रिय हुनुपर्ने र चार महिनासम्म पनि फलाहार गर्न नसक्नेले भने हरिशयनी एकादशी र हरि बोधिनी एकादशीका दिन फलाहार गरी व्रत बस्ने गर्छन् । हरिशयनी एकादशीका अवसरमा बुधबार बिहानैदेखि राजधानीको बूढानीलकण्ठ, उपत्यकाका चार नारायणलगायत देशभरका नारायण एवं विष्णु मन्दिरमा भक्तजनको भीड लाग्छ । यस वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलने डरले २५ जनाभन्दा बढीको भीडभाड नगर्न सरकारले सार्वजनिकरुपमा आह्वान गरेको छ ।
यसअघि जारी गरिएको बन्दाबन्दी केही खुकुलो भए पनि सार्वजनिक यातायात नचलेकाले टाढाटाढाका मानिस मन्दिर जान सक्ने अवस्था छैन । धेरैजसो मन्दिर पनि आममानिसलाई दर्शन एवं पूजाआजाका लागि बन्द गरिएको छ । ती मन्दिरमा नित्य पूजा आराधना मात्र हुने गरेको छ । एकादशीका दिन विशेषगरी चामलबाट बनेका परिकार नखाने रोटी, ढिँडोलगायत फलाहार गर्ने गरिन्छ ।
वैज्ञानिकरुपमा पनि बढी अक्सिजन पाइने प्रमाणित भएको तुलसी विभिन्न रोगका लागि औषधिका रुपमा समेत प्रयोग गरिन्छ । तुलसीको मोठ भएका स्थानमा रोग सार्ने विषालु प्रकारका कीटाणु नआउने विश्वाससमेत गरिन्छ । वास्तु दोष भएका स्थानमा तुलसीको मोठ राख्नाले सकारात्मक फल प्राप्त हुने मान्यतासमेत छ । तुलसी भएका स्थानमा शुद्ध हावा बहने तथ्यसमेत वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि भएको छ ।
चार महिनासम्म विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको तुलसीलाई कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधिनी एकादशीका दिन दामोदरसँग विवाह गरिदिने वैदिक विधि छ । तुलसी र दामोदरको विधिपूर्वक विवाहपछि अग्निस्थापना विधिबाट चतुर्मासा व्रतको उद्यापन गरिन्छ ।
अनि तोडियो भारतको रवाफ
प्रदेश ७ को राजधानी माग्दै डोटीमा अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा
डोटी, असोज–१२ । प्रदेश ७ को राजधानीको माग गर्दै डोटीमा शुक्रवारदेखि अनिश्चितकालीन बन्द आव्हान गरिएको छ । साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायलमा राजधानी बनाउन माग गर्दै संघर्ष समितिले अनिश्चितकालीन
ओनसरी घर्ती र महरा चढेको गाडीलाई लक्षित गरी बम विस्फोट, सबै सकुशल
नेपालगञ्ज, मंसीर–१ । निर्वतमान सभामुख ओनसरी घर्ती, माओवादी नेताहरू कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन लगायत प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरू चढेकोे गाडीलाई लक्षित गर्दै रोल्पा सदरमुकाम नजिकै ब
गाई मृत्युको छानविन गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाद्धारा समिति गठन
भदौ १५, २०७६ नेपालगन्जस्थित काञ्जी हाउसबाट छाडा पशु चौपाया दैलेख लैजाने क्रममा सुर्खेतको कटकुवा भिरबाट खसालेर मारेको विषयमा छानविन गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले छानविन समिति गठन गरेको छ । नेपालगन्ज
न्युज गृहमन्त्री थापाद्वारा हजयात्रीको बिदाई
आर्थिक दाङमा धान उत्पादन बढ्ने अनुमान
न्युज बामगठबन्धनको बहुमतलाई कसैले रोक्न नसक्ने ः रोकाय
मुख्य समाचार देशभर एकै दिन ४० जिल्लामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुन जिल्लामा कति थपिए संक्रमित ?
मनोरञ्जन नेपालमा १४ जिल्ला छन् भनेपछि ट्रोलको शिकार बनिन् कलाकार पूजा शर्मा !